Odoo ERP ဆိုတာဘာလဲ? - Global Connect Asia Odoo ERP ဆိုတာဘာလဲ? -
Odoo ERP ဆိုတာဘာလဲ?
Home/Odoo ERP ဆိုတာဘာလဲ?
SAP, Sage, Microsoft Dynamics, NETSUITE, Odoo စတဲ့ လူသုံးများတဲ့ ERP Solution တွေရှိပါတယ်။ ယခုမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ Odoo ERP ပဲဖြစ်ပါတယ်။။
Odoo ERP ဟာ All in One စီမံခန့်ခွဲမှု Software တစ်ခုဖြစ်ပြီး Open Source လဲဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ User စိတ်ကြိုက် Customize ရေးလို့ရသလို ဈေးနူန်းဟာဆိုရင် အခြားသော ERP တွေထက် ဈေးနူန်းသက်သာ ပြီး အထူးသဖြင့် အသေးစား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေနဲ့ အလယ်လတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ (SME’s) အတွက် အလွန်အဆင်ပြေလွေယ်ကူသာ Software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ All in one (တစ်စုတစ်စီး) ထဲချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နိုင်တာမို့ CRM (Customer Relationship Management), Website/e-Commerce, Billing(ငွေတောင်းခံခြင်း), Accounting(စာရင်းကိုင်), Manufacturing(ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း), Warehouse, Project Management(စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲခြင်း) စသည်တို့ကို အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ပေါင်းစီးလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။။
Overview of Odoo Features • Website Edition • Accounting • CRM • MRP • E-Commerce • Inventory Management • Marketing • Point of Sale • Project Management • Sales Management • Automated Stock Update • Automated Calendar • Automated Invoicing • Leave Management • Timesheets • Reporting • Efficient Integrations • Customer Support & More features……။
အစရှိတဲ့အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များ ဒီစနစ်တွင်ပါဝင်နေသောကြောင့် သီးခြားစီ Software များအသုံးပြုနေစရာမလိုတော့ပဲ လုပ်ငန်း Processes များအားလုံးကို ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် လုပ်ငန်းများကို အဆင်ပြေလွယ်ကူစေမှာဖြစ်ပါတယ်။းနိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင် ဒီစနစ် တစ်ခုလုံးသည် Cloud ပေါ်တွင် အခြေပြုလည်ပတ် ထားတာကြောင့် အခြားသောကုန်ကျစရိတ်များလျော့ချနိုင်သည့်အပြင် မည့်သည် Software, Hardware များကို ထပ်မံ Install လုပ်စရာမလိုပဲ အလွယ်တကူလျင်မြန်စွာအသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါတယ်။ Datas များ Cloud ပေါ်မှာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လည်း မိမိသိရှိလို့သည့် Datas များကို Internet ရရှိနိုင်သည့် နေရာတိုင်းမှာ အလွယ်တကူ သိ၇ှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Odoo ERP စနစ်သည် လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကို ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့် Sale Order များကို စနစ်အတွင်း ထည့်သွင်းပြီးသွားပါက Financial System သို့ထပ်မံထည့်သွင်းစရာမလိုပဲ အလိုအလျောက်ထည့်သွင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး Finance Department မှလည်း ဝင်ငွေများနှင့် Credit Amount များကိုအလွယ်တကူစစ်ဆေးသိရှိနိုင်မှာဖြစ်လို့ Dataများကို အလွယ်တကူသိရှိနိုင်သောကြောင့် မှားယွင်းစွာထည့်သွင်းခြင်း ကိစ္စရပ်များကိုရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါ Order Management Department မှလည်း Order များကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် တိတိကျကျဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုအကြောင်းအရာများအပြင် Odoo ERP System တွင် အခြားအခြားသောလုပ်ဆောင်ချက်မြောက်များစွာရှိနေပါသေးတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ နောက်လာမယ့် Post များတွင်ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
By gcaadmin|2019-11-15T11:44:41+06:30July 4th, 2019|Tags: ERP Myanmar, erp software, erp software company in myanmar, ERP System in Myanmar, Odoo ERP, Odoo ERP Myanmar|0 Comments